लगानी मुख्य खबर नेप्से विश्लेषण
साउन ३, काठमाडौं । यो साता नेप्से परिसूचक २३ दशमलव ९६ अंकले बढेको छ । गत साताको अन्तिम दिन असार २६ गते १ हजार २४८ दशमलव ५३ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक यो साताको बिहीवार (साउन २ गते) १ हजार २७२ दशमलव ४९ विन्दुमा बन्द भएको छ ।
एउटा आर्थिक वर्ष सकिएर नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको यो साताको पाँच कारोबार दिनमा शुरुका चार दिन परिसूचक बढेको छ भने साताको अन्तिम दिन बिहीवार थोरै अंकले घटेको छ । पहिलो दिनदेखि लगातार बढेको बजार बुधवार १ हजार २७४ दशमलव ८६ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
साउन लागेसँगै तीन कम्पनीले चौंथौ त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस त्रैमासमा सार्वजनिक भएको विवरणले कम्पनीले कति लाभांश दिन सक्ला भन्ने आंकलन गर्न सकिने भएकाले साउन महीना बजारका लागि हरियो महीना भनेर पनि चिनिने गरेको छ । गत वर्षहरुमा पनि साउन महीनामा बजार बढ्ने गरेको थियो ।
एक महीना अघिकोभन्दा ११.५९ अंक बढी असार २ गते तुलनामा साउन २ गतेको बजार ११ दशलमव ५९ अंक बढेको छ । असार २ गते १ हजार २६० दशमलव ९० विन्दुमा रहेको बजार साउन २ गते १ हजार २७२ दशमलव ४९ विन्दुमा रहेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोमवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमले हकभन्दा बढी हकप्रद शेयरमा आवेदन दिन सकिने (हकवालाले कतिसम्म बढी हकप्रदमा भर्न पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन) र अर्को स्टक एक्सचेञ्जको स्थापना गर्न नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरेसँगै लगानीकर्ताहरुमा उत्साह छाएको थियो । कम्पनीहरुको हकप्रदमा पूर्ण आवेदन नपरी लिलामीमा निकाल्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र शेयरधनीहरुले बढी हकप्रद भर्न पाउने भएपछि बजार बढ्न पुगेको हो ।
लगानीकर्ताहरु अझैपनि मौद्रिक नीतिको पर्खामा छन् । मौद्रिक नीतिले बिग मर्जर र शेयर बजारमा कस्तो नीति ल्याउला भन्ने पर्खाइमा लगानीकर्ताहरु छन् । आउने मौद्रिक नीतिले बिग मर्जरबारे प्रस्ट पार्ने र कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का सम्बन्धी स्पस्ट धारणा आउने आशामा लगानीकर्ताहरु छन् ।
सातामा बजार पूँजीकरण र सेन्सेटिभ इन्डेक्सको परिवर्तन गत साताको तुलनामा बजार पूँजीकरण १ दशमलव ९३ प्रतिशत बढेको छ । गत साताको अन्तिम बिहीवार रू. १५ खर्ब ५४ अर्ब रहेको बजार पूँजीकरण यो साताको बिहीवार रू. १५ खर्ब ८४ अर्बमा आइपुगेको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने ५ दशमलव ५२ अंकले बढेकोे छ । अघिल्लो साताको बिहीवार २६८ दशमलव ३२ विन्दुमा रहेको सेन्सेटिभ इन्डेक्स यो साताको बिहीवार २७३ दशलमव ८४ विन्दुमा आइपुगेको छ ।
यो साता पाँच कारोबार दिनमा ८५ लाख ९९ हजार १७ कित्ता शेयर किनबेच भई रू. १ अर्ब ९० करोडको शेयर कारोबार भएको छ । गत साताको पाँच कारोबार दिनमा १ करोड १३ लाख ८७ हजार ५१६ कित्ता शेयर किनबेच भई रू. २ अर्ब ६३ करोडको शेयर कारोबार भएको थियो । गत साताको तुलनामा यो साता २७ लाख ८८ हजार ४९९ कित्ता शेयर कम कारोबार भएपछि कारोबार रकम रू. ७३ करोड २१ लाखले घट्न पुगेको हो । गत साताको तुलनामा कारोबार रकम २७ दशमलव ८० प्रतिशत घटेको छ ।
गत साताको तुलनामा उपसमूहको परिसूचकमा आएको वृद्धिदर
सातामा १३ करोड ४९ लाखभन्दा बढी शेयर थपियो सातामा चार कम्पनीको १३ करोड ४९ लाख ७३ हजार ४४६ दशमलव ६ कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा थप भएको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ७५ लाख ४० हजार ३५२ दशमलव ७३ कित्ता हकप्रद, एनएमबि लघुवित्तको १ लाख ११ हजार ३१२ दशमलव ५ कित्ता बोनस, नविल व्यालेन्स फण्डको ११ करोड २० लाख आईपीओ र कुमारी बैंकको १ करोड ५२ लाख २१ हजार ७८१ दशमलव ३९ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ ।